Ọdịiche n'etiti ISO 18000-6C Tags na ISO 18000-6B TagsISO 18000-6B TagsISO 18000-6C Tags
Ugbu a, ndị na-agụ akwụkwọ UHF RFID anyị na modul RFID nwere ụkpụrụ abụọ ịhọrọ site na, nke bu ISO18000-6B na ISO18000-6C (EPC Class1 Gen2) ụkpụrụ. Enwere ike ikwu na ụkpụrụ abụọ a nwere uru nke ha, yabụ kedu ihe dị iche iche?
1. ISO18000-6B nwere ike igu akwukwo rue 10 mkpado n'oge, mpaghara data data onye ọrụ buru ibu, ọnụego enyefe data ruru 40Kbps. A na-ejikarị akara ngosi ISO18000-6B na mpaghara mechiri emechi, dị ka njikwa akụ.
2. EPC C1G2 bụ ISO18000-6C, nke nwere ike ịgụ ọtụtụ narị mkpado n'otu oge, mpaghara data onye ọrụ dị obere, ọnụego nzipu data bu 40Kbps-640Kbps. A na-ejikarị akara ngosi ISO18000-6C na mpaghara mepere emepe, dika njikwa logistics.
Isi ihe ịga nke ọma nke ISO 18000-6C bụ imechi data ikuku ikuku nke akara ngosi, nke bụ usoro nkwukọrịta dị mkpirikpi. N'ụzọ nke a, ọ bụrụhaala na enwere ike ịgbanwe ọnọdụ ike redio n’etiti mkpado na antenna onye na-agụ ya ozugbo, Nkwuputa okwu a nke ọma, ya mere mmelite mmetuta a ka nma ka atara aturu na mkpado ndi mbu. Ejikọtara ya na njirimara ọtụtụ, usoro mgbochi ọgụ, dens agụ-dere mode, transpee ID na mpaghara nzuzo nkeonwe, ọ na-enye usoro njirimara na-abụghị kọntaktị dị iche iche maka ngwa dị iche iche nke logistics na-anọchi anya ya.
ISO18000-6C nwere mpaghara data nkeonwe. N’ikwu ya nkenke, naanị ndị ọrụ nwere ihe karịrị otu nde ọkwa ruru eru ịhọrọ mpaghara data nkeonwe mgbe ị na-enye iwu. Nke a bụkwa atụmatụ ahịa maka ISO18000-6C maka ngwa niile, iji wee tụọ ngwa ndị anaghị akụ na ụba (ma onyinye na ihe a chọrọ abụghị nke akụ na ụba). Na ngwa nkịtị, enwere ike ichebe mpaghara data a site na mkpọchi nke okwu njikwa abụọ ahụ Access na Egbu. Ozugbo akpọchiri ya, apughi ihu ya ma obu ejighi okwu nchịkwa, Agaghị agụ ya ọ gwụla ma ị maara AccessPWD. KillPWD nwere 32bits, na 32bits AccessPWD ezuru maka ịmegide adịgboroja. Otutu aha akara n'okporo uzo tiri mkpu na ha bụ Gen2, nke n’ezie bu NJ nke ISO18000-6C. Enweghi ike inye oru nile nke Gen2, tumadi ọrụ ndị ahụ dị mma, otú ahụ ka onye na-agụ ya. Na Jen, enwere 64Byties njirimara nkeonwe data. Maka ihe karịrị otu nde ndị ọrụ, bụla byte na mpaghara a nwere ike ịkpọchi, ọgụgụ naanị, -agụ-dee, amachibidoro imuta ihe n’enweghi igodo. Ngwaahịa ezigbo mma.
—- ọ bụrụ na ikwesiri ikwu njikọ dị n'etiti ISO18000-6C na Gen2, mee ka o doo anya, ISO18000-6C bụ mpempe nke Gen2. Gen2 nwere ọrụ na scalability, na ISO18000-6C nwere ike inwe.
3. Maka nchekwa data, ISO18000-6B dị na “n'egedege ihu” format, ya mere ikike mkpado buru ibu; ISO18000-6C dị na “ndabere” format. Mgbe ị na-agụ mkpado, Naanị ị ga - agụ EPC wee gụpụta data dị na mkpado ahụ na njikọta na ndabere data, ihe achọrọ maka ikike mkpado dị ala.
4. Ọdịiche na ọnụahịa: Mkpado ISO18000-6C dị ọnụ ala karịa akara mkpado ISO18000-6B, belata ụgwọ ọrụ gị.
Na Mbụ: Uru nke JCOP4 usoro Java kaadị (J2R110|J3R110|J2R150|J3R150|J3R180) na ubi nke Electronic ID kaadị